Fananganana indostrialy - Sina Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd.
Ny zavamaniry indostrialy dia azo zaraina ho trano indostrialy misy rihana sy trano indostrialy marobe arakaraka ny karazana firafitr'izy ireo.
Ny ankamaroan'ny zavamaniry ao amin'ny tranobe indostrialy misy rihana dia hita amin'ny indostria maivana, elektronika, fitaovana, fifandraisana, fanafody ary indostria hafa. Ny gorodon'ny zavamaniry toy izany amin'ny ankapobeny tsy dia avo loatra. Ny famolavolany jiro dia mitovy amin'ny fikarohana siantifika mahazatra sy tranobe laboratoara, ary ny teti-pandehan'ny jiro fluorescent no raisina matetika. Orinasa famokarana amin'ny fanodinana mekanika, metallurgy, lamba ary indostria hafa amin'ny ankapobeny dia tranobe indostrialy tokana, ary arakaraka ny filan'ny famokarana, betsaka kokoa ny zavamaniry indostrialy misy rihana maro, izany hoe zavamaniry marindrano maromaro nilahatra nifanindry, ary ny ny spans dia mety hitovy na tsy mitovy amin'ny takiana.
Amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny takiana modulus fananganana trano, ny sakan'ny trano (span), ny halavany ary ny haavon'ny zavamaniry tokana dia voafaritra arakaraka ny filan'ny teknolojia. Span B an'ny zavamaniry: amin'ny ankapobeny 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36m, sns. Ny halavan'ny zavamaniry: ambany noho ny folo metatra, hatramin'ny zato metatra. Ny haavon'ny H ny zavamaniry: ny ambany dia mazàna 5-6m, ary ny avo dia mety hahatratra 30-40m na ​​avo kokoa aza. Ny halavany sy ny haavon'ny zava-maniry no tena jerena amin'ny famolavolana jiro an'ilay zavamaniry. Ho fanampin'izany, raha ny fitohizan'ny famokarana indostrialy sy ny filan'ny fitaterana vokatra eo anelanelan'ny faritra, ny ankamaroan'ny zavamaniry indostrialy dia manana crano, miaraka amin'ny lanjan'ny 3-5t ary mavesatra taonina an-jatony.
Ny fenitry ny famolavolana zavamaniry indostrialy dia voavolavola mifanaraka amin'ny firafitry ny zavamaniry. Ny famolavolana ny zavamaniry dia mifototra amin'ny filan'ny teknolojia sy ny fepetra famokarana ary mamaritra ny endrik'ilay zavamaniry.
Famaritana famolavolana ho an'ny zavamaniry mahazatra
I. Ny famolavolana ireo zavamaniry indostrialy dia tsy maintsy mampihatra ny politikam-pirenena mifandraika amin'izany, manatratra ny haitao mandroso, ny fahitsiana ara-toekarena, ny fiarovana ary ny fampiharana, miantoka ny kalitao ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fiarovana angovo sy fiarovana ny tontolo iainana.
II. Ity famaritana ity dia mihatra amin'ny famolavolana zavamaniry indostrialy vao namboarina, nohavaozina ary nitarina, fa tsy amin'ny efitrano fidiovana biolojika misy bakteria ho toy ny zavatra mifehy. Ny fepetra voalaza ao amin'ity famaritana ny fisorohana ny afo ity, ny fivoahana ary ny toerana iadiana amin'ny afo dia tsy mihatra amin'ny famolavolana zavamaniry avo lenta sy zavamaniry indostrialy ambanin'ny tany miaraka amin'ny haavon'ny trano mihoatra ny 24m.
III. Rehefa mampiasa ireo trano tany am-boalohany ho an'ny fanavaozana ara-teknika madio, ny famolavolana ireo zavamaniry indostrialy dia tsy maintsy miorina amin'ny takian'ny teknolojia famokarana, manitsy ny fepetra amin'ny toe-javatra eo an-toerana, mitondra azy ireo amin'ny fomba hafa ary mampiasa tanteraka ireo fotodrafitrasa efa misy.
IV. Ny famolavolana zavamaniry indostrialy dia hamorona fepetra ilaina amin'ny fametrahana trano, fitantanana fikojakojana, fitsapana ary asa azo antoka.
V. Ho fanampin'ny fampiharana an'io famaritana io, ny famolavolana ireo zavamaniry indostrialy dia tokony hanaraka ireo fepetra takiana amin'ny fenitra sy fenitra nasionaly ankehitriny ihany koa.
Tetikasa Cold Storage sy Cold Chain